Echiche Banyere Ahịa Na Akwụkwọ? | Martech Zone
Anyị bụ ndị nkwado dị ukwuu nke ịweghachi ọdịnaya… webinars na blog posts, blog posts na whitearies, whitepapers to infographics, infographics to presentations, presentations to eBook… ka ị nwere ike ime ka ọdịnaya rụọ ọrụ maka gị, ka mma itinye ego ị nwere ike itinye na ya na ọdịnaya ka mma ị ga-ebipụta.
E-Ọgụgụ bụ isiokwu nke mkparịta ụka na ngosi redio anyị na Jim Kukral na ndị na-ere ahịa elegharala ntiwapụ ya anya. Ọ bụ ezie na anyị amaghị stats ahụ, anyị maara na ndị mmadụ na-agụ gafee ngwaọrụ mkpanaka ha niile na mbadamba… yana ịgụ na-abịa na ọchụchọ maka ọdịnaya ha chọrọ ma ọ bụ chọrọ. Nke a abụghị naanị ọdịnaya akwụkwọ typical ndị mmadụ na-achọ akwụkwọ ntanetị banyere otu esi eji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Ọ bụrụ n’icheghị echiche iburu ọdịnaya niile dị ịtụnanya ị webatara wee malite ichepụta echiche maka ụfọdụ akwụkwọ ntanetị, ị nwere ike chọọ! Ma ị na-ejere ndị ahịa ozi ma ọ bụ azụmaahịa, ebook na-achọ. Folọ nyocha Infographic ebipụtala ụfọdụ nnukwu stats na ntinye akwụkwọ e-agụ na omume ịzụta metụtara ndị na-eji ha:
Tags: amazon sie-akwụkwọe-agụederedena-agụ iheakwụkwọndị na-agụ ipadnwuoekwentị mkpanaaka
Enweghị m ike ikwenye gị karịa. E-akwụkwọ na-n'ezie inweta ewu ewu ngwa ngwa
karịa ka anyị cheburu na ọ ga-ekwe omume. Na
inwe ike imepụta mmadụ na-egosipụta ntụkwasị obi mmadụ nke bụ ihe dị mkpa. Cheers!